ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ မျိုးနွယ်စုတရားရုံးတွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၉ ဦးသေဆုံးပြီး ၂၀ ဦး ဒဏ်ရာရ - Xinhua News Agency
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း Balochistan ပြည်နယ်မြို့တော် Quetta တွင် ဆေးရုံကားတစ်စီးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စလာမ်မာဘတ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း Upper Dir ခရိုင်ရှိ Jirga ဒေသခံမျိုးနွယ်စုတရားရုံးတစ်ခုတွင် အုပ်စုနှစ်စုကြား အမှုစစ်ဆေးကြားနာချိန်တွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ လူ ၉ ဦးသေဆုံးပြီး အခြားသူ ၂၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်သည် အုပ်စုနှစ်ခုကြား ၎င်းတို့၏နယ်မြေများတွင် လမ်းတစ်လမ်း ဖောက်လုပ်မည့်အကြောင်း အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းရန် တရားရုံး၌ စုဝေးရောက်ရှိနေစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာခရိုင်၊ Barawal ဧရိယာရှိ နေအိမ်တည်ဆောက်ရေးအရာရှိ Laal Bahadar က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
“အမှုစစ်ဆေးကြားနာချိန်အတွင်း အုပ်စုနှစ်စုကြား အချေအတင်ငြင်းခုံမှုစတင်ခဲ့ကြပြီး အခြေအနေဆိုးဝါးလာကာ သေနတ်များအပြန်အလှန်ဆွဲထုတ်ကာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်” ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ချက်ချင်းရောက်လာခဲ့ကြောင်းနှင့် ရန်ပွဲကျူးလွန်သူများအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသူများအား နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ယင်းအနက်အချို့မှာ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေရှိကြောင်း ၎င်းအရာရှိက ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
9 killed, 20 injured in tribal court firing in NW Pakistan
Source: Xinhua| 2021-09-21 00:21:01|Editor: huaxia
ISLAMABAD, Sept. 20 (Xinhua) — Nine people were killed and 20 others injured inafiring between two groups while attendingasession ofaJirga, the local tribal court, in Pakistan’s northwestern Upper Dir district on Monday, police sources said.
The incident happened when the groups gathered in the court to resolveadispute aboutaroad to be constructed on their lands, Laal Bahadar, station house officer of the Barawal area of the district where the incident happened, told Xinhua.
The injured were shifted toanearby hospital where several of them are in critical condition, the officer said. Enditem
Photo : An ambulance carrying bodies of victims is seen in Quetta, capital of Pakistan’s southwestern Balochistan province, on Jan. 3, 2021. (Photo by Asad/Xinhua)
COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းမှုဆောင်ရွက်မှုအား မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြား